Nilôtika (vahoaka) - Wikipedia
Faritra tenenana ny fiteny nilôtika
Ny Nilôtika dia vahoaka teratany ao amin' ny lohasahan' ny ony Nily izay miteny amin' ny fiteny nilôtika, zana-bondron' ny fiteny nilô-sahariana tenenin' ny olona ao amin' ny tapany atsimon' i Sodàna sy ao Kenia ary ao amin' ny farira avaratr' i Tanzania. Ny vahoaka nilôtika dia mpiompy andiam-bimby.
Amin' ny ankapobeny ny vahoaka nilôtika dia mahafaoka ny vahoaka mampiasa ireo fiteny nilô-sahariana niantombohana, ka isan' izany ny Loô (Luo), ny Sara (Sara), ny Masay (Massai), ny Kalenjina (Kalenjin), ny Dinka (Dinka), ny Noera (Nuer), ny Siloka (Shilluk), ny Atekera (Ateker), ary ireo vahoaka miteny maa, izay samy ahitana vondom-poko maro.
Ny Nilôtika no maro an' isa ao amin' ny tapany atsimon' i Sodàna, izay faritra heverina fa niaingan' ny fielezan' izy ireo. Ny Nilôtika no vahoaka maro an' isa manarakaraka ny Banto raha ny ao amin' ny faritry ny Farihy Lehibe no heverina. Izy ireo koa dia maro an' isa ao amin' ny tapany atsimo-andrefan' i Etiôpia.
Ny fandinihana ny foto-tarazo dia toa maneho fa ny vahoaka nilôtika no razana niandohan' ireo vahoaka hafa ao Sodàna. Miavaka amin' ireo mponina hafa ao an-toerana izy ireo noho izy manana foto-tarazo vitsy tsy afrikana. Ny fandalinana dia maneho koa fa nitoka-monina nandritra ny fotoana lava izy ireo sady tsy maka vady avy any ivelany.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Nilôtika_(vahoaka)&oldid=1038485"
Voaova farany tamin'ny 6 Oktobra 2021 amin'ny 10:37 ity pejy ity.